ती बहुगुणाको नेपाल यात्राः जसको मुखबाट पहाड बोल्थ्यो, हिमाल सुसाउँथ्यो - रुपान्तरण
रुपान्तरण २०७८ जेठ २२, शनिबार १४:५८ बजे प्रकाशित
कोरोना संक्रमण भएपछि बहुगुणालाई २५ वैशाख (२०७८) मा उत्तराखण्डको ऋषिकेशस्थित अल इण्डिया इन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एआइआइएमए) अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। किशोर उमेरदेखि नै अंग्रेजविरोधी आन्दोलनमा सरिक भएका बहुगुणाले दुई हप्ता कोभिड–१९ सँग संघर्ष गरे। गान्धीवादी जीवनशैली र आदर्शका बाहक बहुगुणनाले सर्वोत्कृष्ठ मानव जीवनका लागि गरेका कैयौँ संघर्षमा सफलता प्राप्त गरेका थिए। तर, कोभिड–१९ विरुद्धको संघर्षमा उनलाई सफलता मिलेन, ९४ वर्षको उमेरमा ७ जेठमा उनको निधन भयो।
भारतको कुमाउ–गढवाल क्षेत्रमा पर्यावरण संरक्षणका लागि ५ दशकअघि भएको सफल आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताको रुपमा स्व। बहुगुणा चिनिन्छन्। सो आन्दोलनलाई संसारले चाहिँ ‘चिप्को आन्दोलन’ का रुपमा चिन्दछ। उद्गमभूमि कुमाउ–गढवालमा समेत यो आन्दोलन जीवित छैन। तर, वनजंगल र पर्यावरण संरक्षणका लागि जुन शैलीमा त्यो आन्दोलन चल्यो, र सफलता प्राप्त गर्यो, सफलताको कथा र त्यसको अध्ययनमात्रैले पनि नव–पुस्तालाई रोमाञ्चित र आनन्दित तुल्याउँछ। र, त्यो आन्दोलनमा बहुगुणाको योगदान सुन्ने जोकोहीको शीर उनीप्रति श्रद्धाले झुक्छ।
हिमालय क्षेत्रमा बिग्रँदो पर्यावरण उनको चासो र चिन्ताको विषय थियो। हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण जोगाउनसके त्यसको फाइदा त्यहाँका बासिन्दाका अलावा मैदानी इलाकामा बसोबास गर्नेहरुलाई पनि हुन्छ भन्ने मान्यता उनी राख्थे। बहुगुणाको दृष्टिमा पर्यावरणीय दृष्टिले नेपाललगायत हिमाली क्षेत्र जोखिममा रहेको क्षेत्र थियो। त्यसैले, भोक हड्तालको सफलता लगत्तै उनले आफ्नो ध्यान भारतमा मात्र होइन, नेपालतर्फ पनि केन्द्रित गर्न थाले। यसैक्रममा उनले पश्चिमको कास्मिरदेखि पूर्वको कोहिमा ९आसाम० सम्म पैदल यात्रा गर्ने कार्यक्रम बनाए। त्यसक्रमा उनी नेपालपनि आउन भए।
भोक हड्तालको केही महिनापछि कास्मिर–कोहिमा ९आसाम० पदयात्राको क्रममा २०३८ चैत्रमा उनी नेपालको सुदुर पश्चिमी क्षेत्रको महेन्द्रनगर आइपुगेका थिए। साथमा चिप्को आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा साथ दिएका धुमसिंह नेगीपनि थिए। गान्धीवादी दर्शनको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्थे उनी, सकभर होटलमा बस्दैनथे। महेन्द्रगरमा विष्ट थरका एक सैनिक अधिकारीकहाँ उनी बस्न आइपुगेका थिए।
‘पातलो जीउडाल, लामो दारी, सेतो कपडाका कारण मानिसहरु बहुगुणालाई जोगी भन्थे, उहाँ उनीहरुलाई वनजंगल, त्यहाँ बसोबास गर्ने प्राणी हाम्रा लागि कति महत्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा बताउनु हुन्थ्यो’ उप्रेतीले सम्झे, ‘जीउडालमात्र होइन, जीवनशैली, मानिसहरुलाई गर्ने व्यवहार, उद्देश्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरेको आन्दोलन–शैलीका कारण मलाई उहाँ महात्मा गान्धीको अर्को प्रतिमूर्ति हो जस्तो लाग्यो।’
नेगीले भने त्यो संस्मरणमा कास्मिर–कोहिमा यात्राको क्रममा आफूहरु नेपाल प्रवेश गरेको बताएका छन्। कास्मिर–कोहिमा पदयात्राका क्रममा नेपाललाई पनि छनोट गर्नुको अर्को कारण प्राकृतिक सुन्दरताको रसपान गर्नुमात्र नरहेको हुनसक्छ। त्यो बेला नेपालमा तीब्र रुपले वनविनास हुँदै थियो। २०२१ मा निर्माण सुरु भएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग त्यो बेलापनि निर्माणाधिन अवस्थामै थियो। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अधिकांश ट्र्याक चारकोशे झाडीको रुपमा नाम कमाएको घनाजंगल फाँडेर खोलिएको थियो। राजमार्ग निर्माणसँगै त्यसको वरपर वस्ती विस्तारित हुन थालेका थिए। जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउने आर्थिक जोहोका लागि पनि वन विनासलाई तीब्र पारिएको थियो। वनविनाससँगै जंगली जनावरहरुको बासस्थानपनि बिथोलिँदै थियो।
‘ठ्याक्कै मिति त याद छैन, तर पुल्चोकमा कार्यालय छँदा उहाँ नेपाल आउनु भएको थियो र उहाँले हिमालय क्षेत्रको पर्यावरणबारे लामो प्रवचन दिनु भएको थियो’, लामो समय इसिमोडमा निर्देशकका रुपमा काम गरेका मिलन तुलाधर ९पूर्व प्रम झलनाथ खनालका विदेश मामिला सल्लाहकार० भन्छन्, ‘चिप्को आन्दोलनमा सहभागी उहाँका केही शिष्यहरु इसिमोडमा कर्मचारी–अनुसन्धाताका रुपमा रहेकाले पनि होला, उहाँ काठमाडौँ आइरहनुहुन्थ्यो, त्यसक्रममा इसिमोडले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा उहाँले प्रवचन दिनुभएको मलाई सम्झना छ।’
एक पटक काठमाडौँमा रहँदा कार्कीले पत्रिकामार्फत् बज्र होटल (स्वयम्भू, काठमाडौँ) मा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा ‘बहुगुणा प्रमुख अतिथिको रुपमा उपस्थित हुँदैछन्’ भन्ने जानकारी पाए। उनी बज्र होटल पुगे। बहुगुणाकी निजी सचिवसँग भेटी आफूले बहुगुणालाई भेट्न चाहेको उल्लेख गरे। निजी सचिवले भेट गर्न नपाउने टर्रो जवाफ दिइन्।
‘तर कसरी जानेरु समय पनि कम छ। मसँगै अरु साथीहरु पनि आएका छन्’, बहुगुणाले अप्ठेरो सुनाए।
‘४–५ जनालाई टिकट काट्दा धेरै खर्च हुन्छ, तपाईंलाई ठूलो आर्थिक भार पर्छ’, बहुगुणाले भने, ‘हामी गाडीमै आउछौँ। हामीसँग समय धेरै नभएकाले तपाईं पहिले गएर गाउँलेहरुलाई जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ ?’
बज्र होटलले उपलब्ध गराएको गाडी चढेर बहुगुणा भोलिपल्ट १२ बजे चन्द्रनिगाहपुर पुगे। सामुदायिक वन संरक्षणमा सक्रिय गाउँलेहरुसँग भेट गरे, राम्रो काम गरेको भन्दै उनीहरुको प्रसंशा गरे। त्यहाँको डायरीमा प्रसंशाका केही शब्दहरु लेखे। बहुगुणाको टोलीले कार्कीकै घरमा बिहानको खाना खायो।
‘तपाईं तराई क्षेत्रमा रहनुहुन्छ, त्यहाँ पहिले घना जंगल थियो, अहिले त्यो जंगल फडानी भइसकेको छ। यसले तराईमा पानीका अलावा मौसमउपर पनि नराम्रो प्रभाव पारेको छ’, १३ मे १९९६ (३१ बैशाख २०५३) को पत्रमा बहुगुणाले लेखेका छन्, ‘त्यसैले, तराईमा लोप हुँदै गएको वनश्री ९जंगल० लाई जतिसक्दो फर्काउने कोशिष गर्नुहोला।’
‘चिप्को आन्दोलन’ का कारण बहुगुणाको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति भएकाले उनको आगमनमात्रै पनि समाचार बन्थ्यो। यसैक्रममा डा। अर्जुन कार्की (अमेरिकाका लागि निवर्तमान नेपाली राजदूत) ले नेतृत्व गरेको ‘रुरल रिकन्स्ट्रक्सन फर नेपाल’ (आरआरएन) नामक संस्थाले २०५२ फागुनमा बहुगुणालाई काठमाडौँ निम्त्यायो। उनी आएको विषय काठमाडौँका छापा सञ्चारमाध्यमहरुका लागि समाचारको विषय बनिहाल्यो। बहुगुणा काठमाडौँ आएको जानकारी पत्रिकामार्फत् पाएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री (अन्तरिम) कृष्णप्रसाद भट्टराईले डा. कार्कीलाई फोन गरे, भेटघाटका लागि बहुगुणालाई सानेपास्थित आफ्नो निवासमा ल्याइदिन अनुरोध गरे।
हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र हाम्रा लागि बहुगुणा कति महत्वपूर्ण थिए, शक्तिशाली शब्दहरुले त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने क्षमता मेरो छैन। यो पृथ्वीका लागि उनको महत्व कति थियो, अग्रज पत्रकार चन्द्र किशोरले बिहीबार ९१२ जेठ० आफ्नो फेसबुकमा ‘ओबिच्युरी पोष्ट’ मा निकै शक्तिशाली भावका साथ यो कुरा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। अर्का अग्रज पत्रकार विकाश रौनियारले खिच्नु भएको बहुगुणाको तस्वीरका साथ उहाँले लेख्नु भएको छ, ‘यी हुन्, भारतीय राज्य उत्तराखण्डका सुन्दरलाल बहुगुणा, पर्यावरण गान्धी, हिमालय पुत्र। यिनको निधनले हिमालय मौन भयो, रुखहरु उदास भए। नदीहरु रुन थाले। ‘तस्वीर आफै बोल्छ’ भनेजस्तै उनको असाधारण सादगी र विनम्रता झल्किन्छ। हो, बहुगुणा आफैँमा पहाड थिए, हिमालका अटल चुचुरो पनि। उनको माध्यमबाट पहाड बोल्थ्यो र हिमाल सुसाउँथ्यो।।।।’
चन्द्रकिशोर दाईको व्यथित स्वरमा मेरोपनि स्वर थप्दै स्व. बहुगुणालाई आज म यत्तिमात्र भन्न सक्छु, ‘बहुगुणा साहेब, नेपालबाट तपाईंलाई मेरोतर्फबाट पनि नमन।’ साभार : नेपाल खबर डटकम